Author: Kikinos Galrajas
Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay labada hogaamiye ee aan ka feederaalka moowqifkooda ku aadan khilaafka Khaliijka iyo go’aanka dhowladda dhexe.
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed. Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Markii hore arrinta waxa ay ku ekeyd kala aragti duwanaan oo kaliya, balse hadda waxa ay u egtahay in uu u tilaabay khilaaf rasmi ah oo ragaadinaya laamaha dowladeed ee Soomaaliya oo markii hore ku jiray xaalad dib usoo kabasho.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Waxaa xusid mudan in mooshinka ay hormuud ka yihiin xildhibaano horey dowladda ugu eedeeyey in ay Itoobiya ku wareejisay muwaadin Soomaaliyeed, arrintaas solmaaliya markii dambe loo saaray guddi soo baara. Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya 7 Sebtembar Hase yeeshee waxa ay xaaladda cirka isku sii shareertay kadib markii madaxweyne Soomwaliya Ducaale Geelle Xaaf uu sheegay in dowladda federaalka ay diyaaradii uu la socday “ku xayirtay magaalada Hargaysa”.
Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed ee ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeedwaxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood. Qoraalka mooshinka ayaa lagu soo gabogabeeyay jumladdan “Mudane Guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, wax badan ayaan u dulqaadanay meel-ka dhacyada iyo gabood-falada dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed ay ku hayaan dawladaha shisheeyuhu, ayadoo maantay ay na hortaallo fursad aan wax uga qaban karno, waajibaadkeena qaran aan ku gudan karno, Alle iyo umadda hortooda”.
Soomaaliya Waxay kamid tahay Dalalka ugu Faqrisan aduunka, Ma jiro Fayo-dhawr guud oo kafaala qaadaya caafimaadka asaasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed. Sida muuqata, maamul goboleedyadana ku doodayaan, isfaham darada ugu badan waxa ay salka ku haysaa dastuurka oo ay sheegayaan in uusan kala qeexeyn awoodaha.
Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka. Banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo go’aanka madaxweyne Xaaf ayaa lagu qabtay meelo ka mid ah Galmudug, loogana soo horjeedo moowqifka dhexdhexaadnimada ee dowladda dhexe. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga.
Qormadan tii ka horeysay ee ay BBC-da ka qortay arrintan ayaa waxa ay ku sheegnay in ay jirto saansaan ah in muranka laga yaabo in uu u talaabo baarlamaanka.
Daztuurka oo markii dambe xal laga gaaray. Dastuurka kumeel gaarka ah. Markii ugu dambeysay ee Puntland ay go’aan mid kaa la mid ah qaadatana waxa ay ahayd dii bishii Luuliyo, kii, xilligaas oo uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Puntland. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka.
Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. In other projects Wikimedia Commons. Hase yeeshee lama xusin dowladahaas kale. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Xaaf ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in ay faragalin qaawan ku hayso maamulka Galmudug, wuxuuna yiri “Waxaan reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha caalamka iyo UN-ka ogeysiinayaa arrinta faragelinta ah ee dowladda federaalka nagu hayso in ay tahay dhabar jab reer Galmudug ka dhan ah”.
Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Khilaafka Khaliijka iyo siduu u kala qaybiyay Soomaaliya. Dzstuurka laga keenay ” https: Waxaa loo qaateen ah in macnaha laga wado Djibouti iyo gobolada looga hadlo af Soomaaliga ee wadamada jaarka ah.
Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa la sheegaa in Soomaaliya ay saldhigyo ku leedahay iyo in maamul goboleedyada Soomaaliya u gacan dhaafeyso dowladda dhexe, sida ay xildhinaabada Soomaaliya ku eedeeyeen.